Waaheen Media Group » Madaarka Hargeysa oo laga Dhoofiyey 12 Hablood oo Qur-bajoog ahoo dhawaan ciidamadu soo qabteen.
Browse:Home Videos Madaarka Hargeysa oo laga Dhoofiyey 12 Hablood oo Qur-bajoog ahoo dhawaan ciidamadu soo qabteen.
Madaarka Hargeysa oo laga Dhoofiyey 12 Hablood oo Qur-bajoog ahoo dhawaan ciidamadu soo qabteen.
Published by Waaheen Media on May 6, 2017 | Comments Off on Madaarka Hargeysa oo laga Dhoofiyey 12 Hablood oo Qur-bajoog ahoo dhawaan ciidamadu soo qabteen.
Hargeysa(Waaheen) Waxa shalay Galabtii madaarka cigaal ee Magaalada Hargeysa laga dhoofiyey 12 Hablood oo ka mid ahaa 19 Hablood oo dhawaan ciidamada Booliska Somaliland ka soo qabteen dugsi Boodhin ah oo wax lagu barijiray.
Hablahan shalay Diyaarada la saaraya ayaa loo kala diray 8Waddanka Ingiirska, 2Maraynka, 1 Kanada, 1 Waddanka Filland.
Hablahaan ayaa wax la socday oo ilaalinayey laba qof oo cadana ah.